Banyere Anyị - Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd.
Onye na-adọkpụ Caravan
Bicycle ＆ Motorcycle & Skuuta
Bompa ụgbọ ala
Golf ụgbọ ala
Batrị nchekwa nchekwa
Anyanwụ ＆ Usoro ikuku
Storagelọ nchekwa nchekwa ụlọ
UPS (Ike na-adịghị akwụsị akwụsị)
Telecommunication isi ojii
Usoro nlekota oru ntanetị
Obere ike ọkọnọ
Tọrọ ntọala na 2009, Hangzhou LIAO Technology Co., Ltd. bụ ọkachamara na onye na-eduga ọkachamara na LiFePO4batrị. E zigara ngwaahịa anyị karịa mba 20 n'akụkụ ụwa niile.
Anyị amalitelarị usoro QC siri ike ma rụọ ọrụ nke ọma. A na - emepụta ngwaahịa anyị niile n'okpuru usoro njikwa mma nke ISO 9001. Ka ọ dị ugbu a, anyị agafeela ma debe usoro maka usoro njikwa gburugburu ebe obibi ISO 14001 yana ọrụ nlekọta ahụike na nchekwa nchekwa ISO 18001.
Ọrụ magburu onwe ya na àgwà a pụrụ ịdabere na ya na-enyere anyị aka inweta aha zuru ụwa ọnụ, dịka ọmụmaatụ:
Germany, France, Netherlands, Spain, United Kingdom…
Australia, Philippines, Thailand, Singapore…
South Africa, Nigeria…
Na mba ndị ọzọ
Oru oma + Professional Management & Nka na ụzụ otu ， ike ịza ọ bụla ahịa mkpa na oge.
Core Technology ， Kpamkpam R & D System ， enwe ike ịme ngwọta maka mkpa ndị ahịa.
Ọkachamara Production Production & Ndị ọrụ nwere nka, njikwa njikwa zuru oke zuru oke. OEM & ODM nabatara.
Ndị ọrụ ahịa dị elu na ọkachamara. Ha nwere iguzosi ike n'ihe, idebe iwu, ịrụkọ ọrụ ọnụ, ibu ọrụ, na mmụọ ịsụ ụzọ. Ha nwere ikike ire ahia, ikike mkparita uka azụmahịa, ikike nhazi mmekorita, ikike ime ihe nke azụmahịa, ikike njikwa zuru oke, nka ndi mmadu, na ikike imuta ihe na-aga n'ihu. Ha maara nkà Bekee, ihe ọmụma banyere ngwaahịa, ihe ọmụma banyere azụmaahịa mba ụwa, omume azụmaahịa mba ụwa, iwu na iwu na azụmaahịa mba ofesi, yana ụkpụrụ azụmahịa azụmaahịa mba ofesi.
LIAO R & D na mmepụta nke batrị lithium iron phosphate, yana nchekwa, nchedo gburugburu ebe obibi, ogologo ndụ, ikike dị ukwuu, obere nha, ibu ọkụ, arụmọrụ dị elu, yana dịka mkpa nke ngwa, ahaziri maka ụdị dị iche iche nke gburugburu ebe obibi. batrị enyi na enyi, ezi ọrụ nlekọta ndị ahịa ụlọ na nke mba ụwa.
Mmadụ Bịa na-akwado anyị site OEM na ODM
A ga-enwe ekele dị ukwuu na ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma gbasara ụlọ ọrụ anyị na ngwaahịa anyị.
SNS & Ihe Ngosi N'ntanetị
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ ahaziri ngwọta, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.